Kutenga FAQ 🛍️ | ThatsLuck.com
►Ndingawane kupi kodhi yekushandisa? Inowanikwa mu ebook iyo iwe yaunogona kutenga nayo 1-Dzvanya
paAmazon. Vhura menyu Buy🔑 iyo iwe yaunowana pano pamusoro uye sarudza pamusika wenyika yako.
► Chii chine bhuku racho? Iri bhuku rine kodhi yekushandisa, kurodha mirayiridzo uye mamwe eaya mafaqs. Mirayiridzo izere iri mumavara ari pamusoro ThatsLuck uye mumavhidhiyo ari ►YouTube
►Nei iri yakachipa kwazvo? Iwo manyowani e ThatsLuck Iva nemutengo wakakodzera kuti urambe uchisvikika kune vese vashandisi.
►Handina nhoroondo yeAmazon, ndinogona kubhadhara nePayPal? Kwete, chete kutenga pamusika weAmazon munyika yako zvinogoneka. Sarudza Amazon saiti kubva kumenyu Tenga 🔑 uye tora yako Kindle ebook ne 1-Dzvanya
►Amazon haipo munyika yangu, ndinogona kubhadhara nekadhi rechikwereti? Kwete, chete kutenga paAmazon zvinogoneka. Ehezve, iwe unogona kukumbira shamwari kubva kune imwe nyika kuti ikutengere iyo ebook iwe.
►Handina muverengi wema Kindle ebook, ndingaverenga sei bhuku kuti ndiwane iyo yekubvumidza kodhi? Kana iwe ukashandisa PC kana Mac, unogona kurodha yemahara Amazon app pane iyi link ► https://www.amazon.com/kindle-dbs/fd/kcp yako PC / Piritsi / Smartphone zvese iOS uye Android.
► Ini handikwanise kuona bhuku racho, zvinoita here kuti ugamuchire kodhi kana iyo ebook kuburikidza neemail? Kana paine matambudziko nema ebook unofanirwa kubata rutsigiro rweAmazon, hapana ebook kana kodhi inombotumirwa neemail, sezvo kungave kutyora mitemo yeAmazon.
►Izvi zvidzoreso zviri mahara here kana ini ndoda kutenga kodhi yekushandisa nyowani? Iko kushandiswa kwesoftware kwakabatana kune izvo zvinotaurwa mukati ►Mitemo nemamiriro, iyo iwe yaunofanira kuverenga nokungwarira uye iyo yaunogamuchira kwazvo uchishandisa software kana nekutenga bhuku riri kuAmazon.
►Ndanga ndakanganisa kutenga bhuku remanyorero, ndinogona kurichinja? Iko hakuna shanduko kana kutsiva, saka ndokumbirawo usabvunze ivo.
►Amazon haandibvumidze kutenga bhuku, nei? Amazon inoteedzera vese vatengi vayo, pamwe wakambomisikidzwa nekuda kwekusazvibata pamusika, nekuda kweichi chikonzero unofanirwa kubata Amazon rutsigiro zvakananga.